MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဗမာအစိုးရမှ ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်
ဗမာအစိုးရသည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ်ခမ်းအနီး နမ်ဂျန့်၊ ဘန်လုံကျေးရွာမှ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခါနီး ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခွင့် လာရောက် ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် နမ်ခမ်းမှ မြို့နယ် သာသနာရေးမှူး သန့်ဇင် မှ ဘန်လုံကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသော ဘုရားကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခွင့်လာရောက်ပိတ်ပင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာပြည်အစိုးရ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ အပိုဒ် (ဃ) ၃၅၆-၃၅၈ တွင် မြန်မာပြည်တွင် မည်သူမဆို ကိုယ့်ယုံကြည်ရာကို လွှတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် တားဆီးပိတ်ပင်ခွင့် မရှိကြောင် အတိအလင်း ပါရှိသော်လည်း ဗမာအစိုးရမှ ယခုကဲ့တို့ တိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို တားဆီးပိတ်ပင်လျက် ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ဗမာအစိုးရမှ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ချိုးဖောက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
It is said that the Burmese Government banned to stop construction of the Ban Lung Kachin Baptist Church’s building at Nam Jam, Ban lung village near the Nang Hkam town. Actually, the Ban lung Kachin Baptist Church building is almost finished. But Nam Hkam township religious affair officer, Thant Zin, banned to stop the construction at last 25th November, 2011. Anyhow, According to the Burmese 2008 constitution, Article (D) 356-358, Everyone has the freedom to believe and religious freedom in it. But the Burmese government always makes difficulties in several ways to the minority religion as Christian, Muslim and others. It is especially happened in the ethnic areas. It is very clear that the Burmese Government is exploiting the ethnic rights on the freedom of religion.
at 10/10/2012 07:49:00 PM